Usoro ahia: gini ka ọ bụ, nke ndị dị adị na otu esi eme otu | ECommerce ozi ọma
Inwe eCommerce taa esighi ike. Ma iji nwee ihe ịga nke ọma na ya ee, na ọtụtụ. Ya mere, ndị na-etinye ego na atụmatụ ahịa nwere ohere ka mma iru ndị ahịa ziri ezi, ị nweta uru na ịmalite azụmahịa ahụ na ịntanetị.
Ma, Kedu usoro atụmatụ ahịa? E nwere ọtụtụ ụdị? Kedụ ka ị ga-esi laa? Ọ bụrụ n ’ị jụrụ onwe gị ajụjụ niile a, ma ọ bụdị ole na ole ọzọ, oge eruola ka ị lelee ozi anyị nakọtara maka gị.
1 Kedu usoro ahịa ahịa
2 Strategiesdị atụmatụ
2.1 Inbound ahịa atụmatụ
2.2 Marketing Marketing
2.3 Ahịa mmadụ
2.4 Email ahịa, usoro ịre ahịa email
3 Otu esi emepe usoro ahia
Kedu usoro ahịa ahịa
Can nwere ike kọwaa usoro ịzụ ahịa dịka usoro ndị a ụlọ ọrụ ga-emerịrị iji nwekwuo ahịa na akara ngosi gbasara asọmpi ahụ.
Ya mere, ọ bụ usoro nke edere edemede nke, dabere na ihe ndị ụlọ ọrụ ahụ nwere, ma ego ma ihe onwunwe, nwere ike ịmepụta usoro omume. Ndị a ga-enwerịrị ebumnuche nke ịbawanye ahịa nke ngwaahịa ha nwere, ma ọ bụ iji mee ka ndị ọrụ na ndị nwere mmasị na ihe ha nwere mara ya.
Usoro ahia ọ bụla E guzobere ya dabere na ebumnuche ise bụ:
Kpọtụrụ: Ha bụ ndị na-ezo aka n'otu ebumnuche, ihe ịchọrọ ị nweta.
Agaghmari: n'ihi na ị ga-amata etu ị ga-esi tụọ ihe enwetara, ma ọ bụghị na ọ na-esiri ike ịmata ma arụzuru ihe a ma ọ bụ na ọ rụghị.
Ga-enyere aka: Nweghi ike isetịpụ ihe mgbaru ọsọ nke siri ike iru ma ọ bụ nke agaghị ekwe omume. Havekwesịrị ịdị na-enwe ezi uche n'ihi na, ma ọ bụghị ya, anyị ga-ejedebe usoro ịzụ ahịa nke agaghị ekwe omume imezu.
Dị mkpa: metụtara ụlọ ọrụ na ihe ịchọrọ ị nweta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ire ngwaahịa ndị ọzọ, ịnweghị ike ịlele nsonaazụ nke atụmatụ ahụ dabere na mmasị na netwọkụ mmekọrịta na-abawanye.
Na ụbọchị: ị nwere ike ịtọ ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi, ọkara na ogologo oge.
Ekwu okwu banyere ụdị azum nwere ike buru oke. Ma n'otu oge ahụ ọ ga-enye gị a ọhụụ nke otu ị ga-esi tụlee akwụkwọ nke ụdị a dabere na ebumnuche izugbe ịchọrọ ị nweta. Dịka ọmụmaatụ, ịchọ ire ngwaahịa ndị ọzọ na ụlọ ahịa gị abụghị otu maka ịchọ njikọ ọzọ na ndị ahịa na netwọkụ mmekọrịta.
Usoro dị iche iche na, ọbụlagodi, ha ga-adaba n'ime usoro ahịa.
Ya mere, ebe anyị na-ahapụ gị ndị nkịtị taa.
Inbound ahịa atụmatụ
Ọ bụ onye na-elekọta nke ahụ ndị ahịa na-eru akara ahụ. Ihe atụ nke a nwere ike ịbụ nkuzi, nkuzi ma ọ bụ ngwaahịa na-achọ idozi nsogbu ndị ọrụ nwere yana kọwaa etu ị ga - esi dozie ya.
Ọ bụ ikekwe otu n'ime ihe mgbagwoju anya iji mee ihe, karịsịa ebe ọ bụ na taa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na e mepụtara ihe niile.
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ nye uru nke ọdịnaya nke weebụsaịtị gị, ma n'otu oge ahụ meziwanye SEO Maka Google tinye gị na peeji nke mbụ nke nsonaazụ, mgbe ahụ nke a bụ otu n'ime nhọrọ kacha mma maka atụmatụ azụmaahịa.
Ọ dabere na ọ bụghị naanị na ịdebe aha ọma na ikesa mkpụrụ okwu dị n'ime ha, kamakwa na ịnye ọdịnaya ndị masịrị ndị ọrụ, nke na-akụziri ha ma nwee ọmịiko ruo n'ókè nke inwe mmasị na ha.
una usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ bụ, taa, ihe ekwenye siri ike. Ọtụtụ mmadụ na-esonye na netwọk ahụ, yana ebe ọzọ ị nwere ike ịchọta ha.
Ya mere, ịrara ihe onwunwe na mbọ iji kpọsaa eCommerce ma ọ bụ ibe gị site na nhọrọ ndị a ugbu a dị mkpa maka ọtụtụ. N'ezie, n'ọtụtụ oge ebumnuche bụ iji kpọsaa ụdị ahụ, ọ bụghị ire. N'ihi na nke ahụ na-abụkarị ihe nke abụọ; ihe emeputara n'ezie bu uzo nke nkwurita okwu n'etiti ndi soro ya na, n'otu oge ahu, ijiko ha.
Email ahịa, usoro ịre ahịa email
Ọtụtụ eCommerce na-eme ụdị atụmatụ a mana ị ga-akpachara anya maka ọtụtụ na-ele ha anya dị ka spam, ọ bụrụgodi na ha debanyere onwe ha.
Na mgbakwunye, izipu ozi kwa ụbọchị, ma ọ bụ kwa izu, nwere ike ime ka ọtụtụ wepu aha ha ma ọ bụrụ n’oge ole na ole mbụ anaghị enye ha ihe ọ bụla masịrị ha. Na nke a ị ga-agbakwunye na ha abụghị ozi email "ahaziri", ọ bụ ezie na ugbu a enwere nnukwu ọdịiche dị ka ihe ndị masịrị onye ahịa ọ bụla si dị.
Otu esi emepe usoro ahia
Anyị nwere ike ịbụ na anyị ruru ihe kacha mkpa ma ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ a "nkịtị" ahịa atụmatụ. ECommerce ọ bụla nwere ebumnuche, akụrụngwa na ụzọ isi mee ihe. Nke a pụtara na iji a ndebiri ma ọ bụ ọzọ ụlọ ọrụ atụmatụ Itinye ya na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ iji ika gị nwere ike ọ gaghị enweta nsonaazụ ị tụrụ anya ya.
Yabụ, a ga-enyocha ya maka otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla. N'ime ya, a ga-achịkọta ọtụtụ ngalaba, site na ihe ndị dịnụ, ọrụ ndị a ga-arụ, otu esi tụọ nsonaazụ, ohere maka mgbanwe dịka nsonaazụ na ihe ịchọrọ ị nweta.
Iji mee nke a, usoro ndị a bụ:
Setịpụ ihe mgbaru ọsọ gị. Dabere na ihe anyị gwara gị na mbụ. Onweghi onu ogugu ma obu nke kachasi, kama o bu ahia ahia a na-eme kwa afo.
Nnyocha ahịa. A na-enweta nke a site na ịnakọta ozi niile enwere ike gbasara ahịa ịchọrọ iji rụọ ọrụ. Na mgbakwunye, enwere ngalaba abụọ dị mkpa: nke ndị ahịa nwere ike ịnweta, ya bụ, ndị na-ege gị ntị ị na-elekwasị anya na onye ị kwesịrị ịma; na nke ndị asọmpi, nke ị ga-enyocha iji mata ihe ha dị mma iji merie na ihe ha adịghị mma, ka ị ghara ime otu ihe ahụ.
Atụmatụ iji mezuo ebumnuche ndị ahụ. Ihe omume, omume na oru nke aga eme iji mezuo ihe ichoro.
- Budget dị, ma akụnụba ma nke bara uru.
Gbanwee usoro. You nwere ike ịmepụta ụfọdụ atụmatụ dị ka atụmatụ B ma ọ bụrụ na ị hụ na ha dara nke ị tụkwasịrị obi iji mee mgbanwe na ọrụ ma nweta nsonaazụ ka mma.
Ma nke ahụ bụ ya. O nwere ike iyi ihe di nfe mana ezigbo nsogbu nke azum ahia bu, n’enweghi obi iru ala, iru ebum n’uche ndi edobere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Usoro ahia
Otu esi emepụta mmadu ahia